Izindaba - Umehluko phakathi kwe-carbon fibre nensimbi.
Umehluko phakathi kwe-carbon fibre nensimbi.
Phakathi kwezinto eziningi ezisetshenziswayo, izinhlanganisela ze-carbon fibre (CFRP) ziye zanakwa kakhulu ngamandla azo athile akhethekile, ukuqina okuqondile, ukumelana nokugqwala, nokumelana nokukhathala.
Izici ezihlukene phakathi kwezinhlanganisela ze-carbon fiber nezinto zensimbi nazo zinikeza onjiniyela imibono ehlukene yokuklama.
Okulandelayo kuzoba ukuqhathanisa okulula phakathi kwezinhlanganisela ze-carbon fibre nezici zensimbi zendabuko kanye nokwehluka.
1. Ukuqina okuqondile namandla athile
Uma kuqhathaniswa nezinto zensimbi, izinto ze-carbon fibre zinesisindo esincane, amandla athile aphezulu, nokuqina okuthile.I-modulus ye-resin-based carbon fiber iphakeme kunaleyo ye-aluminium alloy, futhi amandla e-resin-based carbon fiber aphezulu kakhulu kunawe-aluminium alloy.
Izinto zensimbi ngokuvamile zifana nobulili obufanayo, kukhona isivuno noma isivuno esinemibandela.Futhi i-carbon fiber yongqimba olulodwa inokuqondisa okusobala.
Izakhiwo zokuwumshini ngokuhambisana nendawo yefayibha zingama-oda angu-1 ~ 2 obukhulu ngaphezu kwalezo ezihambisana nendawo yefayibha eqondile kanye nezindawo zokugunda ubude neziguquguqukayo, futhi amajika okucindezeleka anwebeka ngomugqa ngaphambi kokuphuka.
Ngakho-ke, impahla ye-carbon fiber ingakhetha i-engeli yokubeka, isilinganiso sokubeka, nokulandelana kokubeka kwesendlalelo esisodwa ngokusebenzisa ithiyori yepuleti le-lamination.Ngokwezici zokusabalalisa umthwalo, ukuqina nokusebenza kwamandla kungatholakala ngokuklama, kuyilapho izinto zensimbi zendabuko zingaqiniswa kuphela.
Ngesikhathi esifanayo, ukuqina okudingekayo kwendiza namandla kanye nokuqina okuyingqayizivele kwendiza kanye nokuphuma ngaphandle kwendiza kungatholakala.
3. Ukumelana nokugqwala
Uma kuqhathaniswa nezinto zensimbi, izinto ze-carbon fibre zine-asidi eqinile kanye nokumelana ne-alkali.I-Carbon fiber iyisakhiwo se-microcrystalline esifana nekristalu ye-graphite eyakhiwe yi-graphitization ekushiseni okuphezulu kwe-2000-3000 ° C, enokumelana okuphezulu nokugqwala okuphakathi, kufika ku-50% i-hydrochloric acid, i-sulfuric acid noma i-phosphoric acid, i-elastic modulus, amandla, nobubanzi buhlala ngokungaguquki.
Ngakho-ke, njengento eqinisayo, i-carbon fiber inesiqinisekiso esanele sokumelana nokugqwala, i-resin ye-matrix ehlukene ekumelaneni nokugqwala ihlukile.
Njenge-epoxy evamile ye-carbon fiber-reinforced, i-epoxy inokumelana nesimo sezulu esingcono futhi isawagcina amandla ayo kahle.
I-compress strain kanye nezinga eliphezulu lokucindezeleka yizinto eziyinhloko ezithonya izakhiwo zokukhathala zezinhlanganisela ze-carbon fiber.Izakhiwo zokukhathala ngokuvamile zingaphansi kokuhlolwa kokukhathala ngaphansi kwengcindezi (R = 10) kanye nengcindezi eqinile (r =-1), kuyilapho izinto zensimbi zingaphansi kokuhlolwa kokukhathala okuqinile ngaphansi kwengcindezi (R = 0.1).Uma kuqhathaniswa nezingxenye zensimbi, ikakhulukazi izingxenye ze-aluminium alloy, izingxenye ze-carbon fiber zinezakhiwo ezinhle kakhulu zokukhathala.Emkhakheni we-chassis yezimoto nokunye, izinhlanganisela ze-carbon fiber zinezinzuzo ezingcono zokusebenza.Ngesikhathi esifanayo, cishe awukho umphumela we-notch ku-carbon fiber.Ijika le-SN lokuhlolwa kwe-notched liyafana nalolo lokuhlola okungaphawuliwe kuyo yonke impilo yama-carbon fiber laminates amaningi.
Njengamanje, i-carbon fiber matrix evuthiwe yenziwe ngeresin ye-thermosetting, okunzima ukuyikhipha futhi isetshenziswe futhi ngemva kokuphulukiswa nokuxhumanisa.Ngakho-ke, ubunzima bokubuyiswa kwe-carbon fiber kungenye yezinkinga zokuthuthukiswa kwezimboni, kanye nenkinga yezobuchwepheshe okudingeka ixazululwe ngokuphuthumayo ukuze kusetshenziswe izicelo ezinkulu.Njengamanje, izindlela eziningi zokugaywa kabusha ekhaya nasemazweni angaphandle zinezindleko eziphakeme futhi kunzima ukwenziwa yizimboni.I-Walter carbon fiber ihlola ngenkuthalo izixazululo ezigaywa kabusha, iqedele inani lamasampula okukhiqizwa kwesilingo, umphumela wokutakula muhle, ngezimo zokukhiqiza ngobuningi.
Uma kuqhathaniswa nezinto zensimbi zendabuko, izinto ze-carbon fibre zinezinzuzo eziyingqayizivele ezakhiweni zemishini, ezingasindi, eziklamayo, kanye nokumelana nokukhathala.Kodwa-ke, ukusebenza kahle kwayo kokukhiqiza kanye nokululama okunzima kuseyizingqinamba zokusetshenziswa kwayo okwengeziwe.Kukholakala ukuthi i-carbon fiber izosetshenziswa kakhulu kanye nokusungulwa kwezobuchwepheshe kanye nenqubo.